2008 Buell 1125R Sportbike Test Drive: Long Overdue American Power – Popular… | သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အတူမော်တော်ဆိုင်ကယ် catalog, ရုပ်ပုံများ, ratings, ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများနှင့် discusssions
ATV ရင်းမြစ် - သတင်းထုတ်ပြန်ချက် - Nac ရဲ့ / Cannondale POS ... (35255)
KTM ပြိုင်ပွဲဘလော့ (8109)
Kawasaki ZXR 750 - မော်တော်ဆိုင်ကယ်ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ, သတင်း & Advi ... (7238)
bajaj Pulsar 150 ပုံစံ, ဆန်းစစ်ခြင်း, နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ထားတဲ့ ... (6221)
Pampanga အဘိဓါန် Karylle Solana နိုင်ငံ H ကိုခုနှစ်တွင်အိမ်လော ... (5780)
ဟွန်ဒါ 1960 ကနေခြောက်လဆလင်ဒါဆိုင်ကယ် rc166 (5642)
နေအိမ် → Buell → 2008 Buell 1125R Sportbike Test Drive: Long Overdue American Power - Popular...
2008 Buell 1125R Sportbike Test Drive: Long Overdue American Power – လူကြိုက်များ…
9 ဇွန် 2015 | Author: dima | ဟာ Off comments အပေါ် 2008 Buell 1125R Sportbike Test Drive: Long Overdue American Power – လူကြိုက်များ…
အောက်တိုဘာလ 1, 2009 12:00 AM
ဟာလေဒက်ဗစ်ဆင် (Buell’s parent company) was stretched thin for engine-building resources, so it tapped Rotax to develop the powerplant. The Austrian manufacturer also supplies engines for Aprilia and BMW bikes (plus BRP’s sweet new Can-Am Spyder ), but its powerplant for Buella 72-degree DOHC V-twingets its 1125cc displacement independent of racing’s homologation rules. The result is an honest 146 hp with five or six more ponies available when the ram-air system kicks in.
The 375-pound 1125R feels capable and focused on the road, with ergonomics that are comfortable enough for long-distance rides. While not quite as razor-sharp as the Ducati 1098, the 1125R does boast plenty of usable power, as meaty low-end torque builds steadily and producesanice kick around 8000 rpm before peaking at 10,500 rpm ပါ. Graphs of horsepower and torque curves look like an acutely tilted “L,” reflecting the linearity of the powerplant’s output.
Used 2005 Buell Lightning – reviews, ဆိုငျကယျသမားမဂ္ဂဇင်းမှာစျေးနှုန်းများနှင့်သတ်မှတ်ချက်များ
ထိပ်တန်း 10 Motorcyles တစ်ဦးက Man wow Tech မှသတ်မှတ်ချက်များဆင့်ဆိုရမည်မှာ Make, R...
19.06.2015 | ဟာ Off comments အပေါ် ထိပ်တန်း 10 Motorcyles တစ်ဦးက Man wow Tech မှသတ်မှတ်ချက်များဆင့်ဆိုရမည်မှာ Make, reviews, သတင်း, စျေးနှုန်း…
Ducati Desmosedici GP11 Ducati 60 စက်ဘီး Kawasaki ရင်ပြင်လေး ဟွန်ဒါ DN-01 Ducati Diavel တစ်ဦးဆိုင်ကယ်ဟွန်ဒါအတွက် Harley-Davidson XR 1200 Concept ဆူဇူကီး AN 650 မော်တော်ဆိုင်ကယ်ဟွန်ဒါအိပ်မက်ကလေးများ Dokitto Moto Guzzi 1000 Daytona Injection KTM 125 ပြိုင်ပွဲ Concept ကို Brammo Enertia တော်ဝင် Enfield Bullet 500 ဂန္ထဝင် စက်ဘီး Kawasaki ER-6n Bajaj Discover ဟွန်ဒါ X4 အနိမျ့ Down ဟွန်ဒါ DN-01 အလိုအလျောက်အားကစား Cruiser Concept ကို ဆူဇူကီး B ကိုဘုရင်က Concept ကို စမတ် eScooter ဆူဇူကီး Colleda CO သင်္ဘော MV Agusta 1100 Grand Prix Aprilia Mana 850 ဆူဇူကီး B-ဘုရင်ကနောက်ဆုံး prototype အိန္ဒိယကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် Classic ဟွန်ဒါ Goldwing ရှေ့ပြေးပုံစံ M1